आज घट्यो सुन र चाँदीको भाउ ! हे’र्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो… – SUDUR MEDIA
April 5, 2021 April 5, 2021 AdminLeaveaComment on आज घट्यो सुन र चाँदीको भाउ ! हे’र्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो…
बहुमुल्य धातु सुनको मुल्यमा गिरावट आएको छ । आज चैत २३ गते सोमबारको दिन सुन र चाँदीको भाउमा सामान्य गिरावट देखिएको छ । आज सोमबार सुनको भाउ तोलामा २०० रुपैयाँले घटेको छ भने चाँदीको भाउ तोलामा ५ रुपैयाँले घटेको छ।
आज सोमबार छापावाला सुन प्रतितोला ८७ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ भने तेजबी सुन प्रतितोला ८६ हजार ७५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासँघले जनाएको छ।
त्यस्तै आज चाँदी पनि तोलामा ५ रुपैयाँले घटेर प्रतितोला १ हजार २३५ रुपैयाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ। अघिल्लो दिन चाँदी प्रतितोला १ हजार २४० रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको थियो ।
यो पनि हेर्नुहोस्: चर्चित द्वन्द्व निर्देशक राजेन्द्र खड्गीको महल जत्रो घर, पुर्व युवराजको गाडी देखि दुई लाखको जुत्ता सम्म (भिडियो) ! राजेन्द्र खड्गी नेपालको पहिलो र एक मात्र त्यस्ता द्वन्द्व निर्देशक हुन् जसले अहिलेसम्म ५ सयभन्दा धेरै नेपाली चलचित्रमा द्वन्द्व निर्देशन गरेका छन् ।
त्यो घर देखेपछि उनलाई लाग्यो मैले पनि यस्तै घर बनाउँछु भन्ने लागेको थियो । काठमाडौ आएपछि उनले भुकम्प गएपछि त्यस्तै डिजाइनको घर बनाएको उनको घरमा घर भित्र नै सुइमिगं पुल छ । घर भित्र नै मन्दिर समेत रहेको छ । हेरौ खड्गीको घर